Akpa ụlọ Manufacturers & Suppliers - China akpa House Factory
Mpempe akwụkwọ mpịachi emeela ka ụfọdụ ndozi dabere na ụlọ ụlọ. Enwere ike apịaji ya ka o wee chekwaa ime ụlọ mgbe eburu ya n'ime ihe mbufe. Yabụ, otu 40HQ nwere ike ibu karịa mpịachi containers karịa nkịtị containers (Ọ bụ size bụ 5800x2450x2500mm mgbe apịaji si). Oge ndụ ya tokwara ogologo karịa mbadamba mbadamba. Nke a na ụdị mpịachi akpa na-ejikarị na-ebi n'ụlọ n'ihi ya asọmpi price.
40Ft okomoko 2Bedroom Container Homes Prefab Flat Pack Container Houses
1.Flat Pack Container house 1.Med by prefab floor, mgbidi, ụlọ na ngwa ụlọ 2.Uused maka nzukọ ụlọ, ulo, ụlọ mposi, ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, nchekwa, carport 3.Se Ọtụtụ unit ụlọ nwere ike ikpokọta na-ibu ma ọ bụ elu ụlọ. 4.Shorter ụlọ oge na-azọpụta ndị ọzọ ọrụ ụgwọ 5.One 6 * 2m ụlọ nwere ike wuru 2 ọrụ n'ime 30 nkeji. 6.Save karịa ibu, otu 40ft akpa nwere ike ibu 8 nkeji 7.Save ohere, Nwere ike apịaji na ngwaahịa mgbe ojiji. 8.Can ga-eji circularly maka dị iche iche itukwu ...
Factory Prices Container House Ofụri Esịt Esoputara Modular Double Bedroom Prefab House
1.Flat Pack Container House flatlọ a na-ebu ngwugwu na-enye ihe ngwọta na-enweghị ngwụcha na saịtị azụmahịa, ụlọ modulu, ngwa agha ma ọ bụ ngwa ahụike, ebe obibi nke ọdachi ndị na-emere onwe ma ọ bụ maka mmepe nke ndị njem nleta, omenala ma ọ bụ mmemme mmụta. Nkebi nkọwapụta ígwè ígwè n'èzí O 5950mm * 3000mm * 2800mm Ne ： 5800mm * 2800mm * 2500mm kpọchie njikọ na ịgbado ọkụ n'elu panel 0.45ppgi iko ajị mkpuchi 40kg / m3 celing panel 0.45ppgi cust ...
Ewepụghị Pack Container House Modular Restaurant Buildings Prefab Mbupu akpa House Mobile House